ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌထု
အဖ ဦးထွေး နှင့် အမိ ဒေါ်သိန်းကြွယ်တို့ မှ ၁၉၅၂ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၆ ရက်၊ တနင်္လာနေ.တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရွှေဘိုမြို.နယ်၊ မလားကျေးရွာတွင် မွေးဖွား သန်.စင်တော်မူခဲ.သည်။ သက်တော် ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင် မလားရွာ စံကျောင်းဆရာတော်ထံ ရှင်သာမဏေပြုခဲ.သည်။
၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် မလားရွာစံကျောင်းဆရာတော် ဦးပဏ္ဍိတကို ဥပစ္ဖျယ်ပြုပြီး မိဘနှစ်ပါး၏ ပစ္စယာနုဂ္ဂဟကို ခံယူလျှက် မလားကျေးရွာ စံကျောင်းခဏ္ဍသိမ်တော်တွင် မြင်.မြတ်သော ရဟန်းဘ၀သို.ရောက်တော်မူခဲ.သည်။
ရွှေဘိုမြို့ ပိဋကတ်နယူးပဒေသကျောင်း ဆရာတော် ဘဒန္တ သာသန နှင့် မန္တလေးမြို့ မစိုးရိမ်တိုက်ဟောင်း ပိဋကတ်နယူးပဒေသကျောင်း ဆရာတော် ဘဒန္တ ကောဝိဒါဘိဝံသ ထံတော်တို့၌ ငယ် လတ် ကြီး နှင့် ဓမ္မာစရိယစာချတန်းတို့ကို သင်ယူအောင်မြင်တော်မူခဲ့သည်။
၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် ကျေးဇူးရှင် မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သာသနာပြုစေလွှတ်ချက်အရ မုဒုံမြို.၊ မြို.မ မဟာစည်သာသနရိပ်သာတွင် ပဓါန နာယက ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ ဆရာတော်အဖြစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ.သည်။ ရန်ကုန်မြို. မဟာစည်သာသနရိပ်သာ ဋ္ဌာနချုပ်တွင် မဟာစည်နာယကအဖြစ် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့သည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ် မေလတွင် လန်ဒန်မြို.၊ လန်ဒန်ဝိဟာရ၏ နာယကဆရာတော်အဖြစ် တာဝန်ယူပြီး သာသနာပြုလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ရင်း ကျမ်းမာစွာသီတင်းသုံးလျှက်ရှိသည်။
Venerable Kusalarnanda was born on 16th February 1952, and he becameanovice monk at the age of 12 andafully ordained as monk in 1972. He had studied at the Masoeyin Kyaung Taik in Mandalay, where he received religious degrees of primary, middle and higher education, including Dhammacariya examination.
He wasaspiritual meditation master of the Myo Ma Mahasi meditation center in Mudun in 1981, and in 2003, he has also beenaspiritual advisor at the Mahasi Meditation center, headquarter in Yangon. Since he has been taking asapatron of the London Vihara 2005, makes the Buddhist missionary works in the United Kingdom.
Tel: (+44) 07533 336 448